Tag: daacad macaamiisha » Martech Zone
Tag: daacad macaamiisha
Waqtiga Akhrinta: 2 daqiiqo Mustaqbal dhaqaale oo aan la hubin, waxaa muhiim ah in ganacsiyada ay diiradda saaraan sii-haynta macaamiisha iyada oo loo marayo khibrad macmiil oo aan caadi ahayn iyo abaalmarinno daacadnimo ah. Waxaan la shaqeeyaa adeegga gudbinta cunnada ee gobolka iyo barnaamijka abaalmarinta ee ay soo saareen wuxuu sii wadaa inuu sii wado macaamiisha inay ku soo laabtaan marar badan. Istaatistikada Daacadnimada Macaamiisha Sida ku cad Khabiirka Cadaanka ah ee Khabiirka, Dhisida Daacadnimada Nooca Dunida Iskutallaabta: 34% dadka ku nool Mareykanka waxaa lagu qeexi karaa inay yihiin kuwo daacad u ah sumadda 80% kuwa daacadda u ah sumcadda ayaa sheeganaya inay
Waqtiga Akhrinta: 3 daqiiqo Coronavirus waxay kor uqaaday dunida ganacsiga waxayna ku qasbeysaa ganacsi kasta inuu fiirfiiriyo erayga daacadnimo. Daacadnimada Shaqaalaha Ka fikir daacadnimada shaqaalaha aragtidiisa. Ganacsiyadu waxay fasaxayaan shaqaalaha bidix iyo midig. Heerka shaqo la'aanta wuxuu ka badnaan karaa 32% sababo la xiriira Coronavirus Factor oo ka shaqeynta guriga ma aqbali karto warshado kasta ama jago kasta. Shaqo ka eryiddu waa xalka dhabta ah ee dhibaatada dhaqaale… laakiin ma jecla jacaylka. COVID-19 ayaa saameyn ku yeelan doona
Waqtiga Akhrinta: 5 daqiiqo Sharax kooban oo ku saabsan waxa isgaarsiinta Omni-channel yahay iyo astaamo iyo istiraatiijiyad gaar ah oo ku dhex jirta kooxaha suuqgeynta si loo kordhiyo macaamiishooda 'daacadnimada iyo qiimaha.
Khamiista, Febraayo 15, 2018 Axad, Febraayo 18, 2018 Stefan Des
Waqtiga Akhrinta: 6 daqiiqo Ma kugu adag tahay inaad soo saartid raadad? Haddii jawaabtaadu haa tahay, markaa kaligaa ma tihid. Hubspot ayaa soo warisay in 63% suuqleyda ay dhahaan soo saarista taraafikada iyo hoggaanku waa caqabadooda ugu sareysa. Laakiin waxaad u maleyneysaa inaad la yaabban tahay: Sideen ugu abuuraa hoggaamiyeyaal ganacsigeyga? Hagaag, maanta waxaan ku tusayaa sida loo isticmaalo suuqgeynta waxyaabaha ku jira si loo abuuro tilmaamo meheraddaada ah. Suuqgeynta maaddada waa istiraatiijiyad wax ku ool ah oo aad u adeegsan karto abuuritaanka hoggaamiyeyaasha